Midkeed Kooxdaada U Dooran Lahayd Virgil van Dijk Iyo Sergio Ramos? - Gool24.Net
Midkeed Kooxdaada U Dooran Lahayd Virgil van Dijk Iyo Sergio Ramos?
May 13, 2020 Mahamoud Batalaale
Codbixin lagu kala dooranayay labada difaac dhexe ee Sergio Ramos iyo Virgil van Dijk ayay taageerayaasha kubbada cagtu ku muujiyeen midka ay labadan difaac kooxdooda u dooran lahaayeen.
Sergio Ramos waxa uu sanado badan ka mid ahaa difaacyada dhexe ee aduunka ugu fiican halka Virgil van Dijk uu gabi ahaanba badalay xaaladii Liverpool ee dhawrkii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
Shaki ma laha in Sergio Ramos iyo Virgil van Dijk ay waqti xaadirkan ka mid yihiin difaacyada dhexe ee kubbada cagta ugu fiican, laakiin haddii lagu odhan lahaa mid kaliya dooro midkeed qaadan lahayd?
Haddaba taageerayaasha kubbada cagta ayaa su’aashan ka jawaabay waxayna inta ugu badani doorteen in kabtan Sergio Ramos ay u qaadan lahaayeen kooxdooda haddii ay kala dooran lahaayeen Virgil van Dijk.
Codbixinta lagu kala saarayay Sergio Ramos iyo Van Dijk waxaa ka qayb qaatay 168,000 kun oo taageere waxayna intooda badani doorteen Sergio Ramos inkasta oo Van Dijk laftiisu aanu cod yar helin.
Codbixin labadan difaac lagu kala dooranayay ayuu Sergio Ramos helay boqolkiiba 55% ka mid ah codkii lagu kala baxayay halka Virgil van Dijk uu helay boqolkiiba 45%.
Sergio Ramos ayaa saamayn badan ku soo yeeshay kooxdiisa Real Madrid iyo xulka qarankiisa Spain wuxuuna hadda galay dhamaadka waqtigiisii ugu fiicnaa ee kubbada cagta halka Virgil van Dijk uu hadda ku jiro waqtigiisii ugu fiicnaa.
Boqolkiiba 10% taageerayaashii codbixintan ka qayb qaatay ah ayaa noqday kuwa kala saaray Sergio Ramos iyo Virgil van Dijk iyada oo kabtanka reer Spain uu ka hor maray Van Dijk sida ay codbixintani soo saartay.
Sergio Ramos ayaa xili ciyaareedkan kooxdiisa Real Madrid dagaal wayn ugula jira in ay Barcelona ka joojiyaan in ay koobka horyaalka La Liga difaacato laakiin Virgil van Dijk ayaa si cad qayb wayn uga soo qaatay in Liverpool ay haddaba tahay kooxda loo sharaxay koobka Premier League.
Marar badan waxaa Virgil van Dijk lagu tilmaamay difaaca aduunka ugu fiican isaga oo sanadihii ugu danbeeyay meel sare ka galay qiimaynta abaal marinta xidiga aduunka oo uu 2019 kii saddexda ugu danbeeyay uu Messi iyo Ronaldo la soo gaadhay.
Si kastaba ha ahaatee, codbixinta ay taageerayaashu ku go’aamiyeen in Ramos ay kooxdoodu u qaadan lahaayeen haddii la kala dooransiiyo Van Dijk ayaa muujinaysa in 34 sano jirkan reer Spain uu wali saamayn badan leeyahay.